Hafanàm-po nomerika · Jona, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Hafanàm-po nomerika · Jona, 2011
Tantara mikasika ny Hafanàm-po nomerika tamin'ny Jona, 2011
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 30 Jona 2011
Nisy ireo fihetsiketsehana nokarakaraina nanerana ny tanàna 25 fara-faha keliny maneran-tany ny Sabotsy 25 Jona 2011, mba hanehoana ny firaisan-kina amin'ireo gadra politika miisa 18 eo ho eo izay mitokona tsy mihinan-kanina any amina fonja Iraniana roa. Natombok'ireo gadra politika izany fitokonan'ny hanoanana izany tamin'ny fahafatesan'ny mafana fo ara-politika roa, Reza Hoda Saber sy Haleh Sahabi.
Siria: Revolisionan'ny Black Comedy
Black comedy dia iray amin'ireo fomba iresahana ny tranga mampihetsi-po. Izay niseho vao haingana tao Siria, nisian'ny rà nandriaka no sady nahaketraka ny maro, dia nitondra ihany koa tamin'ny firongatry ny bilaogy, ny pejy facebook ary ny lahatsoratra izay niezaka nanaraby ny zava-nisy, ary nampahafantatra sy nanasongadina ireo fanambarana ofisialy somary adaladala-izay indraindray toa mivaona tanteraka.
Ejypta: Taom-polo Nahazotoana Niserasera Niandian-kevitra Tao amin'ny Tweet Nadwa
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 28 Jona 2011
Nanjary lasa fotoana isan-kerinandro ny zavatra efa natao, nihaona fanindroany indray ireo Ejipsiana mpitsiokantserasera amin'ny alalan'ny Twitter mitarika adihevitra fantatra amin'ny anarana hoe Tweet Nadwa (famoriam-bahoaka). Taorian'ny fahombiazan'ny fiodinana voalohany izay nifantoka indrindra momba ny resaka islamista, ny amin'ny fomba fahitana azy ireo ao anatin'ny fiaraha-monina Ejysiana sy ny vinavinan'izy ireo...
Syria: “Manohana an'i Bashar izahay Koa Aza Helingelenin'izao Tontolo Izao”
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 27 Jona 2011
Halan'ny olona rehetra i Bashar El-Assad. Halan'ny lehilahySyriana izy. Halan'ny vehivavy Syriana izy. Na dia ny lehilahy zavoto Amerikana mahita azy ho toy ny vehivavy Syriana mitia vehivavy aza, dia mankahala azy ihany koa. Kanefa, marina tokoa ve fa tsy mankahala azy mafy toy izany ny Syriana sasantsany araka ny fihevitsika?...
Makedonia: Repoblika Twitter .mk
Eoropa Afovoany & Atsinanana 27 Jona 2011
Mitohy ny Fihetsiketseham-panoherana ao Makedonia, raha mbola mandà na dia ny hiresaka izay tadiavin'ny olona amin'ny fangaraharana, andraikitra politika ary ny fanajanonana ny herisetra ataon'ny polisy fotsiny ihany aza. Tamin'ny alahady, dia nisy sarim-pamantarana vaovao nasehon'ny mpanao fihetsiketsehana sasany: Sainam-pirenena Masedoanina misy sary famantarana Twitter ao aminy, ho fahatsiarovana ny asan'ny fiarahamonina Twitter.
Syria: Sainam-pirenena mirefy 2.3km Tamin'ny Fihetsiketsehan'ireo Mpomba Ny Fitondràna Tao Damaskaosy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 26 Jona 2011
Nanao fifamoriana ho fanohànana ny filoha Bashar Al Assad ireo Siriana mpanohana azy ny 15 Jona, nitondra sainam-pirenena mirefy 2.3 km tao Mezzeh, renivohitr'i Damaskaosy, sady niventy ny hoe "Mila an'i Al Assad ny Vahoaka.” Eto ny fanehoan-kevitra avy amin'ireo tambajotra sosialy.
Afrika Mainty 25 Jona 2011
Arabia Saodita: Vehivavy Eo Aorian'ny Familiana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 25 Jona 2011
Vehivavy Saodiana maro omaly no nandray ny familiana tao Arabia Saodita mba hankahatra ny fandraràna azy ireo tsy hitondra fiara. Natao tamin'ny Facebook ny fanetanana, ary namafisin'ireo resaka ifanakalozana tamin'ny fampahalalam-baovao ara-tsosialy hafa, toy ny vohikala fanaovana bilaogy kiritika Twitter.
Malezia: Nampihantona Ny Vohikala Mahaleotena Mpampiely Vaovao Ny Sompatra An-tserasera
Azia Atsinanana 22 Jona 2011
Malaysiakini, vohikala mahaleotena mpitatitra vaovao ao Malezia, dia lasibatry ny mpanafika ka tsy afaka nidirana mihitsy nanomboka ny Talata 12 Aprily 2011. Io fanafihana io dia niseho andro vitsivitsy talohan'ny fifidianan'ny firenena Sarawak